Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) - Hello Sayarwon
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း)
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ကဘာလဲ။
ဒူးနာတယ်ဆိုတာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အရွတ်၊ အရိုးနုများ စုတ်ပြဲခြင်းစတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းစတဲ့ ရောဂါများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မပြင်းထန်တဲ့ ဒူးနာခြင်းများကို ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ကုသလို့ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံး၊ ပတ်တီးစည်းခြင်းတို့ကလည်း ဒူးနာသက်သာစေပါတယ်။ အချို့လူနာများမှာတော့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့အထိ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်၆၀ကျော်လျှင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းခံပေါ် မူတည်ပြီး ဒူးနာတဲ့နေရာနဲ့ ပြင်းထန်မှု ကွာဟနိုင်ပါတယ်။ ဒူးနာခြင်းရဲ့ တွဲတဲ့အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ဒူးကို အပြည့်အ၀ မဆန့်ထုတ်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါရှိကြောင်း စောစောသိရှိပြီး ကုသနိုင်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာခြင်းနဲ့ အခြားအရေးပေါ်အခြေအနေများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်ဆိ အတတ်နိုင်ဆုံးစောစောသွားပြရပါမယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာ တို့ကြောင့်ဒူးနာခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒူးကို ထိခိုက်မိလျှင် ဒူးဆစ်အနားရှိ အရွတ်၊ ဒူးဆစ်ကို ဝန်းရံထားတဲ့ အရည်အိတ်များ၊ အရိုး၊ အရိုးနုများနဲ့ ဒူးဆစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝ်တဲ့ အရွတ်များ ဘာကိုမဆို ထိမိနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များသော ဒူးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာအချို့မှာ
ညို့သကျည်းရိုးနဲ့ ပေါင်ရိုးဆက်ထားတဲ့ အရွတ်၄ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရှေ့ဘက်ကြက်ခြေခတ်အရွတ် စုတ်ပြဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်စကတ်သော၊ ဘောလုံးနဲ့ ဦးတည်ရာခဏခဏ ပြောင်းရတတ်တဲ့ အားကစားနည်းများ ကစားသူများမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဒူးအရှေ့ဖုံးရိုး patella ဟာ ယာဉ်တိုက်မှု၊ ချော်လဲခြင်းတို့မှာ ကျိုးနိုင်ပါတယ်။
ရာဘာလို ခိုင်မာတဲ့ ညို့သကျည်းရိုးနဲ့ ပေါင်ရိုးကြားက အခုအခံ အရိုးနုမှာဖြစ်တယ်။
အချို့ဒူးဒဏ်ရာများမှာ ဒူးဆစ်အပြင်ဘက်ကနေ အကြောအဆစ်များ ဒူးဆစ်ပေါ်မှာ ချောမွေ့စွာလှုပ်ရှားဖို့ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အရည်အိတ်လေးများ ရောင်ရမ်းတတ်ပါတယ်။
ဒူးနာစေတတ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့မှာ
တခါတရံ အရိုး/အရိုးနုတို့ ထိခိုက်မိခြင်း၊ ပြုန်းတီးခြင်းတို့ကြောင့် အရိုးအစလေးပဲ့ထွက်ပြီး အဆစ်ထဲမှာ မျောနေတတ်ပါတယ်။
တင်ပါးအပြင်ဘက်မှ ဒူးအပြင်ဘက်အထိ ထိစပ်နေတဲ့ တစ်သျှူးအတန်းလိုက်ဟာ တင်းကြပ်လာပြီး ပေါင်ရိုးအပြင်ဘက်နဲ့ ပွတ်တိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူးဆစ်အရှေ့ကို ဖုံးထားတဲ့တြိဂံပုံ အရိုး patella ဟာ ဒူးအပြင်ဘက်သို့နေရာလွဲရောက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပါး သို့မဟုတ် ခြေဖဝါးနာခြင်း
တင်ပါး သို့မဟုတ် ခြေဖဝါးနာလျှင် သင်ဟာ နာတဲ့အဆစ်တွေကို ညှာပြီးလမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလမ်းလျှောက်ပုံပြောင်းတဲ့အတွက် ဒူးခေါင်းကို ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။
အဆစ်ရောင်ခြင်း အမျိုးတစ်ရာကျော် ရှိပါတယ်။ ဒူးခေါင်းကို ထိခိုက်နိုင်ခြေအများဆုံး အမျိုးအစားများမှာ
အဆစ်ပြုန်းတီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးရွားဆုံး အဆစ်ရောင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ သွေးလေးဘက်နာဟာ ဒူးအပါအဝင် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဘယ်အဆစ်မဆို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ မိမိခုခံအားစနစ်က တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံ၇တဲ့ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရစ်အက်ဆစ်ကျောက်များ အဆစ်ထဲမှာ စုပုံလာတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါက်ရောဂါဟာ ခြေမမှာ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒူးဆစ်မှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်-
အဝလွန်ခြင်းကြောင့် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လှေကားအတက်အဆင်းလုပ်ခြင်း စတဲ့ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုများကပင် ဒူးဆစ်များကို ဒါဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဆစ်တွင်းရှိ အရိုးနုများပျက်စီးမှုကို မြန်ဆန်စေပြီး အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နှုန်းကိုလည်း မြင့်မားစေပါတယ်။
ဒူးခေါင်းထိခိုက်မိခြင်းဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ တောင့်တင်းနေသော သို့မဟုတ် အားနည်းနေသော ကြွက်သားများဟာ ဒူးဆစ်အပေါ်သက်ရောက်တဲ့ဖိအားကို မျှယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အဆစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းနည်းသွားပါတယ်။
အချို့အားကစားနည်းတွေမှာ ဒူးဆစ်အပေါ် ဖိအားပိုသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ နှင်းလျှောစီးဘွတ်ဖိနပ် အမာစားများနှင့် နှင်းလျှောစီးခြင်းဟာ ချော်လဲနိုင်ခြေများစေပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောကစားရာမှာ ခုန်ပြီးတစ်ပတ်လှည့်ခြင်း၊ ပြေးတဲ့အခါ ဒူးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆောင့်ချနေခြင်းတို့ကြောင့် ဒူးခေါင်းထိခိုက်နိုင်ခြေ မြင့်မားစေပါတယ်။
ယခင်က ဒူးခေါင်းထိခိုက်မိဖူးလျှင် ထပ်မံထိခိုက်နိင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများမရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ ဒူးနာခြင်း မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒူးနာသည်ဟု ထင်ပါက ဆရာဝန်က သင့်ကို စမ်းသပ်ပြီး လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါမယ်။ အများစု ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စစ်ဆေးမှုများမှာ-
ဆရာဝန်က အရင်ဆုံး အရိုးကျိုးခြင်းနဲ့ အရိုးပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့ရောဂါများကို သိနိုင်ဖို့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့ အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
CT scan များမှာ ဓါတ်မှန်ကို ထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ရိုက်ထားပြီး ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းပိုင်းပုံရိပ်များကို ဖြတ်ပိုင်းပုံများအနေနဲ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ CT scanမှ အရိုးပြဿနာများနှင့် အပိုပစ္စည်းများကို မြင်နိုင်စေပါတယ်။
အသံလှိုင်းကို အသုံးပြုပြီး ဒူးခေါင်းအတွင်းနဲ့ အနီးတဝိုက်ရှိ ပျော့ပျောင်းတဲ့တစ်သျှူးများ၊ လှုပ်ရှားပုံများကို တိုက်ရိုက်ပုံဖော်ကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
အရွတ်၊ အကြော၊ အရိုးနုနှင့် ကြွက်သားများထိခိုက်မှုကို အထူးသဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်မယ့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။
Knee Sprain (ဒူးနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွေးလေးဘက်နာ၊ ဂေါက်စတဲ့ရောဂါတွေမှာ အနာသက်သာစေဖို့နဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို ကုသနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်က ဆေးညွှန်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒူးတဝိုက်ရှိ ကြွက်သားများကို အားကောင်းစေခြင်းဖြင့် ဒူးဆစ်ကိုပိုခိုင်စေပါတယ်။ ပေါင်အရှေ့နဲ့ ပေါင်အနောက်ပိုင်းရှိ ကြွက်သားများကို အဓိကထား လေ့ကျင့်ပါတယ်။ မမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကို ပြုပြင်ပြီး အားကစားနဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို နည်းစနစ်မှန်မှန် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ဟန်ချက်ထိန်ုးညှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အချို့လူနာတွေကို အဆစ်ထဲတိုက်ရိုက်ဆေး သို့မဟုတ် အခြားအရာများထိုးဖို့ ဆရာဝန်က အကြံပြုပါတယ်။ ဥပမာ၊
ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုအပ်တဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း ချက်ခြင်းခွဲစိတ်ရန် မလိုပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်မခွဲစိတ်ဘဲ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြုလုပ်ခြင်းတို့၏ အကျိုးအပြစ်များနှင့် သင့်အတွက် အဆင်အပြေဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် ဒူးနာခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အလွန်လေးသောအရာများကို မသယ်ပါနှင့်။ အမြင့်တက်ရန် အခြေခိုင်သော ခွေးခြေလှေကားထစ်ကို သုံးပါ။ ကုလားထိုင်နှင့် အခြားအခြေမခိုင်သော အရာများပေါ် မတက်ပါနှင့်။
စကိတ်စီးခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်းစသည့် အားကစားနည်းများတွင် ဒူးကာကို ဝတ်ဆင်ပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားများ မပြုလုပ်မီနှင့် ပြုလုပ်အပြီးတွင် ကြွက်သားများအတွက် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအနေနှင့် အကြောလျှော့ပါ။
http://www.healthline.com/symptom/knee-pain. Accessed January 10, 2017.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/knee-pain/diagnosis-treatment/clinical-trials/rsc-20190206m . Accessed January 10, 2017.
http://www.webmd.com/pain-management/knee-pain/knee-problems-and-injuries-prevention . Accessed January 10, 2017.